मार्च १, २०२२ को लागि शीर्ष ३ टेक स्टकहरू - Shiv's Era
मार्च १, २०२२ को लागि शीर्ष ३ टेक स्टकहरू
1. शिवराले सफ्टवेयर, अर्धचालक, र टेलिकम प्रविधिमा नवीनतम र उत्कृष्ट प्रस्ताव गर्दछ।
२. एनालिटिक्स इनसाइटले तपाइँलाई मार्च १, २०२२ को लागि शीर्ष प्राविधिक स्टकहरू ल्याउँछ ताकि तपाइँ कर्भ भन्दा अगाडि रहन सक्नुहुन्छ।
3. Mandiant, Inc ले तपाईंको डाटा सुरक्षित राख्न साइबर रक्षा समाधानहरू प्रदान गर्दछ।
4. कन्सेन्ट्रिक्सले तपाइँको व्यवसाय सञ्चालनलाई अनुकूलन गर्न नवीन ग्राहक अनुभव समाधानहरू प्रदान गर्दछ
मार्च 1, 2022 मा उत्कृष्ट वृद्धि सम्भावना देखाउँदै शीर्ष 30 टेक कम्पनीहरू
एनालिटिक्स इनसाइटले मार्च १, २०२२ को लागि शीर्ष प्राविधिक स्टकहरू अगाडि ल्याउँछ। स्टक बजार पछिल्लो समय प्रविधि कम्पनीहरूले भरिएको छ। सफ्टवेयर, सेमीकन्डक्टर र टेलिकम कम्पनीहरू सबैभन्दा उन्नत आविष्कारहरू लिएर आउँदैछन् जुन पहिले कहिल्यै सोचेको थिएन।
Mandiant CEO: “हामी यस क्वाटरमा हाम्रो राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दैछौं”
Mandiant साइबर रक्षा समाधान को एक प्रदायक हो। कम्पनीले खतरा अनुसन्धानकर्ताहरू, रिभर्स इन्जिनियरहरू, खुफिया विश्लेषकहरू, र 26 भन्दा बढी देशहरूमा अवस्थित घटना प्रतिक्रियाकर्ताहरू प्रयोग गर्दछ। कम्पनीले 2021 को अन्तिम त्रैमासिकदेखि पर्याप्त लाभहरू हेरिरहेको छ।
ए ओड टु एभनेट, जसले रोबोटिक्स समाधानको 20 वर्ष मनाउँछ
Avnet एक वैश्विक प्रविधि वितरक र समाधान प्रदायक हो। यसले IoT, कम्पोनेन्ट र उपकरणहरू, हार्डवेयर र सफ्टवेयर, र एकीकरण स्थानहरूमा सञ्चालन गर्दछ। कम्पनीले वार्षिक रूपमा लगभग 157 बिलियन एकाइहरू पठाउँछ।
ग्राहक अनुभव सल्लाहकारले के गर्छ, र Concentrix के हो?
Concentrix ले प्रक्रिया अप्टिमाइजेसन, टेक्नोलोजी इनोभेसन, फ्रन्ट र ब्याक-अफिस स्वचालन, एनालिटिक्स, र थप सहित प्रविधि-संचालित ग्राहक अनुभव समाधानहरू प्रदान गर्दछ। कम्पनीले 40 भन्दा बढी देशहरूमा सञ्चालन गर्दछ र 750 भन्दा बढी ग्राहकहरू छन्।
NVIDIA ले नयाँ Tesla V100 Datacenter GPU घोषणा गरेको छ
NVIDIA ग्राफिक्स प्रोसेसिङ इकाइहरू (GPUs) को निर्माता हो, कम्प्युटर चिपको एक प्रकार मूल रूपमा कम्प्युटर ग्राफिक्सको लागि डिजाइन गरिएको हो। हालका वर्षहरूमा क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ र मेसिन लर्निङका लागि GPU हरू बढ्दो रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।
इन्टेलको नयाँ चिप उच्च-अन्त कम्प्युटिङको संसारमा कुञ्जी हो।
इंटेल पीसी र सर्भरहरूको लागि केन्द्रीय प्रशोधन एकाइहरू (CPUs) डिजाइन र निर्माण गर्दछ। कम्पनीले अन्य कम्पनीहरूको लागि चिप्स बनाउने योजनाको साथ, निर्माणमा ठूलो दांव लगाइरहेको छ।